WARBIXIN XIISO BADAN: Dagaal 50 Maalmood Soconaya Oo U Dhexeeya Real Madrid & PSG, Xiddiga Dahabka Ku Shiday, Taariikhda Cusub, Doorka UEFA Iyo Arrimo Kale - Laacib
HomeWararka Champions LeagueWARBIXIN XIISO BADAN: Dagaal 50 Maalmood Soconaya Oo U Dhexeeya Real Madrid & PSG, Xiddiga Dahabka Ku Shiday, Taariikhda Cusub, Doorka UEFA Iyo Arrimo Kale
WARBIXIN XIISO BADAN: Dagaal 50 Maalmood Soconaya Oo U Dhexeeya Real Madrid & PSG, Xiddiga Dahabka Ku Shiday, Taariikhda Cusub, Doorka UEFA Iyo Arrimo Kale
December 28, 2021 Abdiwahab Ahmed
Wareegga 16ka Champions League waxa sannadkan ku kala calaf-qaadi doona oo ay midkood macasalaamayn doontaa tartanka, midda kalena usii socon doontaa dhinaca wareegyada dambe, labada kooxood ee waaweyn ee Real Madrid iyo Paris Saint-Germain.
Quwadaha waaweyn ee Yurub ayaa 50 maalmood la sugi doonaa isku-dhacooda koowaad, hase yeeshee iyadoo ku dhowaad laba bilood ka hadhsan yihiin ayaa waxa abuurantay xiisad u dhaxaysa labada naadi, taas oo uu udub dhexaad u yahay da’yarka reer France ee Kylian Mbappe oo uu dhacayo qandaraaskiisa Parc des Princes.
Labadan kooxood oo hore meelo kala fog uu u gaadhsiiyey tartankii fashilmay ee European Super League ee uu hindisihiisa iyo hoggaamintiisa lahaa Florentino Perez, isla markaana ay dhinaca kale soo taagnaayeen Nasser Al-Khelaifi iyo Leonardo oo si adag uga soo horjeeday, waxa uu xaalkoodu marayaa meel uu dagaal warbaahinta ah soo dhaafay oo ay hadda gudaha kooxahooda iska ugaadhsanayaan.
Real Madrid ayaa xagaagii ay PSG u diiday inay 200 milyan oo Euro kaga iibiso Kylian Mbappe, iyadoo waliba laacibkan uu xor u noqonayo inuu bisha January heshiis hordhac ah usii saxeexo kooxda reer Spain.
Waa sidee xaaladaha labada kooxood?
Labada kooxoodba waxay qaadanayaan xilli ciyaareed wanaagsan, waxaanay horyaalladooda ku hoggaaminayaan dersin dhibco ah oo ay ka horreeyaan naadiyada kusoo xiga. Haddii xaaladuhu sidan kusii socdaan, mid walba waqti hore ayaa loo caleemo-saari doonaa horyaalka dalkeeda, hase yeeshee waxa uu hadal ka taagan yahay Champions League oo la hubo in midkood ku hadhayo wareegga 16ka.
Carlo Ancelotti ayaa hoggaaminaya Real Madrid iyadoo aanu jirin hoggaamiye si gaar ah farta loogu fiiqo oo ay kooxdu leedahay, waana naadi si koox ahaan ah u wada shaqaynaya oo isku duubnidoodu muujisay inay yihiin kooxda ugu cadcad hanashada LaLiga.
Mauricio Pochettino ayaa isaguna xammili la’ xiddigaha ku urursan Paris, kuwaas oo marar badan dhibaato uu ku qabo sida uu u maamulayo. Lionel Messi wali si fiican uma saldhigin, Neymar wuu dhaawacan yahay, shaki ayaana la gelinayaa inuu taam u noqonayo lugta hore ee kulanka Real Madrid, halka Mbappe uu haysto bogagga hore ee warbaahinta oo uu qandaraaskiisu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedka.
Sergio Ramos ayaan wali la jaan-qaadin kooxda, laba kulan oo kaliya oo horyaalka Ligue 1 ah oo uu ciyaarayna uu kaadh cas ku mutaystay, halka Gianluigi Donnarumma uu isaguna dood ku abuuray Keylor Navas oo qaabka uu tababaruhu u kala dooranayo ay maalin walba abuurto dood.
Miiska kala-sarraynta, labada kooxoodba waxay haystaan min 46 dhibcood oo ay ka urursadeen 19 ciyaarood oo horyaalka, waxaanay sidoo kale ka midaysan yihiin 14 guulood, afar barbarro ah iyo hal guul-darro. Laakiin waxay ku kala duwan yihiin Champions League oo ay Real Madrid kaalinta koowaad kaga soo baxday hormadeeda, halka PSG ay kaalinta labaad kusoo gudubtay oo ay Manchester City ka horreysay.
Kiiska Kylian Mbappe ee dagaalka abuuray
Maalinta Sabtida ee January 1, Kylian Mbappe xor ayuu u yahay inuu la hadlo Real Madrid, heshiisna la gaadho, laakiin waxa uu usii ciyaari doonaa PSG illaa inta uu xilli ciyaareedku dhamaanayo. Florentino Perez ma filayo inuu Mbappe soo gaadhi doono Santiago Bernabeu bilowga sannadka, waxaase uu muujin doonaa samir dhawr bilood ah, halka PSG ay iyaduna wax walba u samayn doonto sidii ay laacibkan usii xajisan lahayd.
PSG waxay rumaysan tahay in Real Madrid ay dheelayso ciyaar uskag ah oo ay u gacan-dhaafayso Mbappe, taas ayaana dabka ka dhex hurisay labada kooxood oo si badheedh ah warbaahinta iskugu weeraray.
Dabcan, Kylian Mbappe shaadhka PSG ayuu xidhnaan doonaa labada ciyaarood ee wareegga 16ka ee ay Real Madrid iska hor imanayaan. Lugta hore waxay dhici doonaa February 15 halka ciyaarta labaadna ay tahay March 8. Intaas kaddib, waxay Real Madrid rajaynaysaa inay Kylian Mbappe kusoo bandhigto Santiago Bernabeu marka la gaadho July 1.
Sharciga dhaqaale wanaagsa, UEFA & Arrimo kale
Real Madrid iyo PSG ma aha laba kooxood oo uu xidhiidhkoodu wanaagsan. Waxay isku jiidheen Super League, kaddibna waxay isku weerareen sharciga dhaqaale wanaagga (Financial Fair Play) oo aya Real Madrid ku eedaysay PSG inay meel kaga dhacday, laakiin kooxda reer France waxay la safatay UEFA oo ay dhinacooda raacday markii ay kooxaha waaweyn ee Yurub tartanka gaarka ah samaysteen.
Siyaasadda ay ciyaartay PSG, waxay rumaysan tahay inay kaga gabban-karayso sharciga dhaqaale wanaagga oo ay ku mutaysan karto ganaaxyo, laakiin shuruucda Yurub ma aha kuwo saaxiibtinimo loo jabiyo.
Barcelona ayaa iyaduna marar dhawr ah PSG si toos ah ugu eedaysay inay sharciga meel kaga dhacday.
Soo laabashada Ramos, Messi oo Bernabeu imanaya iyo kiiska Kylian Mbappe…..
Waa arrimo mid walba ay gaarkeeda u leedahay xiiso gaar ah. Sergio Ramos ayaa kasoo horjeedsan doona kooxdii uu 16ka sannadood dhiigga u shubayay ee uu wax walba u sameeyey sidii ay guulo u gaadhi lahayd, taas oo aanu marnaba niyadda gashan inuu ka tegi doono amaba kasoo horjeedsanayo. Hadda way dhacaysaa, waxaana la sugayaa bisha February haddii uu caafimaad qabo.
Sheekada kale waa Lionel Messi oo cadowga koowaad ee Real Madrid ahaa sannado badan, isla markaana uu garoonka Santiago Bernabeu u yahay meelaha uu ugu jecel yahay inuu goolal ku dhaliyo. Xilligiisii Barcelona ayuu Los Blancos ku dhibay garoonkan, hase yeeshee waxa uu markan iman doonaa isaga oo xidhan shaadhka koox kale, qaab ciyaareedkiisuna aanu u fiicnayn sidii hore.
Waxa intaas dheer, Kylian Mbappe oo ay jamaahiirta Real Madrid tusi doonaan sidii uu yahay ciyaartoygoodii oo kale. Waxay u samayn doonaan soo dhoweyn. Waxay taageero ugu muujin doonaan si ay qalbigiisa ugu soo jiidaan Santiago Bernabeu.
Kylor Navas, Angel di Maria iyo Achraf Hakimi ayaa iyaguna kusoo laaban doona garoonkoodii hore iyo kooxdoodii hore.
50 maalmood oo is diyaarin ah
Real Madrid iyo PSG waxay haystaan 50 maalmood oo ay iskugu diyaariyaan ciyaartan. Los Blancos ma haysato wax dhaawacyo ah waqtigan, sidoo kalena ciyaartoydii uu kaga dhacay COVID ayaa usoo laabtay. Haddii ay taam ahaanshahaas kusii socdaan, tababare Carlo Ancelotti waxa uu awoodi doonaa inuu haysto xiddigihiisa waaweyn. Koobka ugu soo horreeya ee Madrid ay ku dagaallamayso waa Supercopa de Espana oo Sucuudiga lagu qabanayo badhtamaha January.
PSG ayaa dhinaceeda waxay sannadka cusub ku furanaysaa kulamo fudud iyagoo xataa qorshaynaya inay safar ku tagaan waddanka Qatar.